Nhau - Aquaculture - kuwedzera kudiwa kunounza mikana mikuru
Indasitiri yezve aquaculture yave kuwedzera uye kubuda nekukurumidza. Nhasi, aquaculture inotora 50 muzana yehove dzinodyiwa pasi rose. Kuvimbika pane aquaculture inotarisirwa kuramba ichiwedzera, panguva dzinoverengeka mwero wekukura kweimwe kugadzirwa kwenyama. Uku kuvimba kuri kukura pakurima kwemvura kunopa mikana mikuru, asiwo kunowedzera njodzi kune vanogadzira.
Sezvo dzvinyiriro yekuwedzera goho iri kuwedzera, kushushikana kuri kukura pamusoro pekukanganisa kwemaitiro emvura yakavhurika pane zvakatipoteredza uye mhuka dzesango nekuda kwechirwere uye kuwedzera kwemarara. Panguva imwecheteyo, hove nehove dzakasimudzwa munzvimbo dzakavhurika dziri panjodzi yekubatwa nezvirwere zvinogara munzvimbo yakasikwa, uye dzinofanira kuvimba nenzizi kana mafungu emunyanza kutakura tsvina uye kuchengetedza mamiriro akakodzera. Kuita mashandiro anoshanda ekuchengetedza zvipenyu anodiwa kuchengetedza mhuka dzemuno uye kuchengetedza nharaunda isina chirwere chechirimwa chine hutano kwakaoma mumasisitimu akavhurika. Zvinhu izvi zvakawedzera kudiwa kwemasystem-based system ayo anopatsanura hove dzinorimwa nehove kubva kune dzimwe dzadzo dzemusango.
Yakavharwa-loop masisitimu, matangi-akavakirwa masisitimu akadai seRe-circulating Aquaculture Systems (RAS) kana kuyerera-kuburikidza nehurongwa, inopa kupatsanurwa kubva kumarudzi ekuzvarwa uye inobvumira kuwedzera kugadzirwa munzvimbo dzeaquaculture. Aya masisitimu arimo anoita kuti zvikwanise kugadzira mamiriro akakwana ehutano hwezvirimwa, kuvandudza goho nemhando. RAS inotoshandisa mvura shoma.
Yakachengeteka, inogoneka, inodhura-inoshanda maitiro nekutonga kwakakwana - kwakapfava.
Nguva yekutumira: Jul-21-2020